Taridia Advocacy 2.0 : Fitaovana iasana amin’ny fanandrata-teny nomerika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Janoary 2019 3:37 GMT
Ny Taridia Advocacy 2.0 (Fitaovana ilaina amin'ny fanandratateny nomerika) no mamariparitra ny sasany amin'ireo teknika sy fitaovana tsara indrindra azon'ny mpikatroka – sy ireo hafa te-hianatra avy amin'ity lohahevitra ity – ampiasaina amin'ny fanentanana fanandrata-teny antserasera. Raha nifantoka tamin'ny fomba mahomby amin'ny bilaogy ho fitaovana fanandratateny ny taridia nataonay teo aloha (Blog for a Cause!), ity taridia ity kosa hanavatsava ireo fomba vaovao avy amin'ny fampiasa web 2.0 hafa.
Manasongadina ireo zava-niainana mahomby tamin'ny fikatrohana web 2.0 nataon'ireo mpikatroka nomerika ao an-toerana manerana izao tontolo izao.
Avy amin'ny “Geo-bombing” [mg] mankany amin'ny “multi-blogging (mamaham-bilaogy maro)” sy Twitter mankany amin'ireo “mash-ups”, savasavainay ny sahan'ny fanandratateny nomerika, hanampiana ireo mpikatroka hahatratra ny mpihaino sy mpamaky izay mety ho tsy tratra mihitsy teo aloha.
Geo-bombing: YouTube + Google Earth [mg] Ny Geo-bombing no iray amin'ny teknika izay mety ampiasaina ahafahana mampahomby ny fampielezana ireo fanentanana an-dahatsary YouTube amin'ny alalan'ny fampidirana an-tsaritany ireo fampiasan'ny Google tahaka ny Google Maps sy ny Google Earth. Amin’izao fotoana izao ianao afa-mijery ny lahatsarinao voafangitra sy mifarango (geotagged) ao amin'ny Google Earth sy ny Google Maps. Hiseho avokoa izay rehetra lahatsary YouTube voafangitra rehefa misy ny manapika hisokatra ny Google Earth/Maps amin'ny Youtube [vakio bebe kokoa…]